Jeneraal Gorod Oo Shaqada Laga Eryay iyo Fahad Yaasiin oo Taliye Ku xigeenka Sirdoonka Noqday.
Thursday August 16, 2018 - 12:00:20 in Wararka by Super Admin
Xilli ay sii xoogeysanayaan weerarada Xarakada Al Shabaab ay ka fulinayso magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka ayay madaxda ugu sarraysa dowladda Federaalka shaqada ka eryeen saraakiil ciidan kuwa kalane magacaabeen.
War qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska Max'med Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu magacaabay taliyaal ciidan iyo ku xigeenno halka shaqada la eryay dhowr sarkaal oo xilal ka hayay melleteriga iyo sirdoonka.
Ugu horrayn Farmaajo ayaa aqbalay shaqa joojin horay loogu sameeyay ku xigeennada taliyaha Nabad sugidda wuxuuna taliye ku xigeenka cusub ee Nabad sugidda umagacaabay Fahad Yaasiin oo horay u ahaa agaasimaha madaxtooyada Villa Somalia.
Fahad Yaasiin oo ah siyaasi shantii sanadood ee lasoo dhaafay dowladda Qadar uqaabilsanaa arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa larumeysanyahay in uu ahaa maskaxdii ka dambeysay in Xasan Gurguurte iyo Farmaajo madax ka noqdaan dowladda Federaalka.
Ninkan ayuu Farmaajo u wareejiyay dhanka dagaalka amniga iyo sirdoonka ee ka socda magaalada Muqdisho waxaana larumeysanyahay in uu yahay qorshe uu isaga hor leexinayo kadib markii siyaasiyiinta mucaaradka ah Farmaajo ku dhaliileen in uu jeebka ugu jiro Fahad iyo sirdoonka Qadar.
Sidoo kale waxaa shaqada laga eryay Jeneraal C/wali Jaamac Gorod oo ahaa taliyaha ciidamada melleteriga waxaana lagu bedelay Jen. Daahir Aadan Cilmo Indha Qarshe oo horay xilkaan usoo qabtay.
Taliyihii ciidamadda Badda iyo taliye ku xigeenkii Booliska ayaa iyana shaqada laga eryay, tallaaban uu Farmaajo qaaday waxaa sabab u ah baa laleeyahay weeraro bishii lasoo dhaafay ay Al Shabaab ka fulisay magaalada Muqdisho illaa iyo haddana waxaan shaqeyn wasaaraha arrimaha gudaha iyo amniga oo xaruntoodi ay burbursantahay.